नयाँ सरकार निर्माणबारे जसपामा दुई धार देखिएपछि देउवाले चाले प्लान B !
May 12, 2021 N88LeaveaComment on नयाँ सरकार निर्माणबारे जसपामा दुई धार देखिएपछि देउवाले चाले प्लान B !
काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गरेको समयसीमा सकिनु एकदिन अगाडि उक्त पहलको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसको ध्यान सत्ताधारी एमालेको आन्तरिक विभाजनतर्फ मोडेको देखिएको छ। शीतलनिवासबाट आह्वान भएको भोलिपल्टै कांग्रेसले मङ्गलवार माओवादी केन्द्र तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग एकसरो छलफल […]
May 12, 2021 N88LeaveaComment on निषेधाज्ञा जारी गर्न बाँकी चार जिल्ला
काठमाडाैं । मुलुकका अधिकांश जिल्लाले निषेधाज्ञा लागू गरी कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणको प्रयास जारी राखेका छन् । मुलुकमा अब जम्मा चार जिल्लाले मात्रै निषेधको आदेश जारी गर्न बाँकी छ । हालसम्म ७३ जिल्लाले निषेधाज्ञा जारी गरी सङ्क्रमणको साङ्लो चुँडाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये सात जिल्लामा आंशिक आदेश लागू छ । यद्यपि सङ्क्रमणको गति भने कम […]
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह डिस्चार्ज
May 12, 2021 May 12, 2021 N88LeaveaComment on पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह डिस्चार्ज
काठमाडौँ । कोरोना संक्रमित पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह डिस्चार्ज भएका छन् । नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका पूर्वराजा शाह वुधबार बेलुका ८ बजे डिस्चार्ज भएका अस्पतालले जनाएको छ । कोरोनामुक्त भएसँगै पूर्ण स्वस्थ भएर उनी डिस्चार्ज भएका हुन् । उनी १९ दिनअघि कोरोना संक्रमण भएर अस्पताल भर्ना भएका थिए । पूर्वरानी कोमल शाहको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको अस्पतालले […]
जेठ २ देखि चिनियाँ भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज लगाइँदै, कहाँ कहाँ लगाउन सकिन्छ ?
May 12, 2021 N88LeaveaComment on जेठ २ देखि चिनियाँ भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज लगाइँदै, कहाँ कहाँ लगाउन सकिन्छ ?
काठमाडौँ । कोरोनाविरुद्धको चिनियाँ भेरोसेल खोप जेठ २ गतेदेखि दोस्रो डोज लगाइने भएको छ । पहिलो मात्रा लगाएकाहरुले दोस्रो मात्रा जेठ २ गतेदेखि लगाउन पाउने भएका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वैशाख २२ गतेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । खोप लगाउँदा भीडभाड भएकाले मन्त्रालयले स्थगित गरेको थियो । उपत्यकामा दोस्रो चरणको भेरोसेल खोप […]
May 12, 2021 N88LeaveaComment on गण्डकीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गुरुङले लिए शपथ
पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुन: नियुक्त भएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले शपथ लिएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले बुधबार साँझ पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइन् । गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले ३ दिनको समय दिएर प्रदेशसभाका दलहरुलाई बहुमतको सरकार गठनको दावी पेश गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । बुधबार नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णचन्द्र […]
भीम रावल रुख चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा उत्रने
May 12, 2021 N88LeaveaComment on भीम रावल रुख चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा उत्रने
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिकल्पमा नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर नेपाली कांग्रेसले राजीनामा दिने नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई उपनिर्वाचन कांग्रेसकै चुनाव चिन्ह दिएर जिताउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गठनबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन सक्रिय नेताहरूले एमालेको माधव नेपाल समुहका नेताहरुसँग यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन । केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा नयाँ […]
संसार छोड्नु अघि कैलालीकी शिक्षिकाको अन्तिम टि’कटक भिडियो: भोलि यो संसार छा’डे’र जान सक्छु
May 12, 2021 N88LeaveaComment on संसार छोड्नु अघि कैलालीकी शिक्षिकाको अन्तिम टि’कटक भिडियो: भोलि यो संसार छा’डे’र जान सक्छु
कैलाली । टिकटक’मा अ’पलोड भएको एउटा भिडियोमा मा’स्क लगाएकी एक महिला देखिन्छन्। उनले बनाएको टिकटकमा भनिएको थियो ‘आमा धेरै थ’कित छु, जिन्दगीदेखि। सायद अब बाँ’च्न सक्दिँन होला यो स्वा’र्थी संसारमा। मलाई मा’फ गरिदेउ है आमा तिमीलाई खुसी दिन सकिँन।’ त्यसकै भोलिपल्ट आइतबार उनले फेरि थप एक भिडिओ अपलोड गरिन्। बिस्तरामै सु’तिरहेको अवस्थामा उनले भन्दैथिन, ‘कोरोनाको […]
कसैबाट १ रुपै सहयोग नलिइ : संक्रमितको घरघरमा पुगेर सेवा गर्ने बाग्लुङकी ‘साहसी चेली’ नितु
May 12, 2021 N88LeaveaComment on कसैबाट १ रुपै सहयोग नलिइ : संक्रमितको घरघरमा पुगेर सेवा गर्ने बाग्लुङकी ‘साहसी चेली’ नितु
May 12, 2021 May 12, 2021 N88LeaveaComment on चोखो मनले देवी माताको पाउलाई छोएर दर्शन गर्नुहोस, मनोकामना पुरा हुनेछ… जय माता जी !
काठमाडौँ । जन्म महिना, दिन, गते, बार, समयले व्यक्तिको भविष्यमा निकै प्रभाव पारेको हुन्छ । जबकी कोही व्यक्ति यति भाग्यमानी हुन्छन् उनीहरुले हरेक कार्यमा सफलता हाँसिल गर्न सफल भएका हुन्छन् ।हिन्दु परम्पराअनुसार महिलालाई लक्ष्मीको रुपमा लिने प्रचलन रहेको छ। लक्ष्मीलाई धनकी देवी भनेर पुजा गर्ने गरिन्छ । त्यसकारण आज हामी तपाईहरुलाई चार महिनामा जन्मिएका महिलाहरुको […]
May 12, 2021 May 12, 2021 N88LeaveaComment on ‘रेम्डेसिभिर’ ३२ हजार डोज आइपुग्यो, ४ हजार नाै सय मूल्य, सम्पर्क नम्बरसहित
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणको उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधि ‘रेम्डेसिभिर’ बङ्गलादेशबाट थप ३२ हजार डोज नेपाल आइपुगेको छ । औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले मंगलबार बेलुका थप ३२ हजार डोज औषधि हिजो नेपाल आइपुगेको जानकारी दिनुभएको छ । यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले रिम्डेसिभिर चिकित्सकले ताेकेकाे आधारमा सम्बिन्धत वितरकबाट सिधै खरिद गर्न । […]